छाती हाम्रो, मर्जी अरुको !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, कार्तिक १८, २०७३
यो सामग्री उनले नियमित लेख्ने आईचोक.इनबाट नेपाली रुपान्तरण गरिएको हो । फरक मत राख्ने रुचाउने लेखिका उपन्यासकार समेत हुन् ।
कृष्णबहादुर तामाङको उद्घोस : ‘एमाले दुष्ट र मूर्ख बाहुनहरूको पार्टी हो’
बि पीले इन्दिरा गान्दिलाई भने तिम्रो सोमत रैनछ, नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस नगर !
विज्ञको यस्तो सुझाब, रानीपोखरी मल्लकालीन र बालगोपालेश्वर ग्रन्थकूटशैलीमा बनाऊ !
‘अहिले नै आशु नसक्नुस प्रचण्ड कमरेड, एमालेसँग एकता गरेकै दिनदेखि जिन्दगीभर रुनुपर्नेछ’ ! [ भिडियो रिपोट ]
नरेन्द्रजंग पिटरको गर्जन : ‘धन्दावालहरुले नै वाम राजनीति चलाएका रहेछन्’ !